Miketrika hala-bato ny Tim sy ny HVM | NewsMada
Miketrika hala-bato ny Tim sy ny HVM
Miditra amin’ny politika maloto? Mitetika hala-bato ny eo anivon’ny HVM sy ny Tim. Efa niteraka resabe ny voka-pifidianana navoakan’ny Ceni sy ny HCC tamin’ny fiodinana voalohany lasa teo. Nanana porofo mazava ny kandidà laharana faha-13 fa tokony ho lany tamin’iny. Nanaiky ny hiatrika ny fihodinana faharoa ny tenany noho ny fahendreny. Mbola ametrahan’ny maro ahiahy anefa ny Ceni na efa niezaka nanadio sy nanala izany izy ireo tato ho ato. Sarotra ny hahazoana antoka ny hampandio ny fifidianana satria efa miara-dia amin’ny Tim ireo mpikambanana sasany eo anivon’ny HVM, efa fantatra amin’ny fanaovana hosoka sy ny hala-bato tamin’ny fihodinana voalohany teo iny.
Ekena fa nisy ny fitsirihana ny “logiciel” ampiasaina amin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Niarahan’ireo delegasiona manokana manampahaizana eo amin’ny sehatry ny haitao amin’ny kajy mirindra izany. Nilaza ny vokatra izy ireo fa ampy ny fiarovana ny fitaovana tsy hosetrasetrain’ny hafa na hitsabahan’ny mpisompatra.
Tsy azon’ireo solontenan’ny mpanara-maso iraisam-pirenena natrehina anefa io fitsirihana io raha ny tranga niseho. Manan-jo tanteraka ny hanatrika izany izy ireo ho mariky ny fangaraharana. Midika izany fa tsy voahaja ny fangaraharana ventesin’ny Ceni. Mipetraka ny ahiahy ny hisehoan’ny fanodinkodinana sy hosoka indray. Efa nanaporofo ny mpanara-baovao fa nisy ny tsikombakomba teo amin’ny Ceni sy ny kandida Rajaonarimampianina ka nezahin’ny eny Alarobia ny nampiakarina tsikelikely ny isam-bato azony tamin’ny fihodinana voalohany. Tranga mety hiseho amin’ity indray mitoraka ity izany.